Tuesday March 17, 2020 - 08:33:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Cudurka Carona Virus ayaa fara ba'an ku haya mas'uuliyiinta ugu sarraysa wasaaradda dagaalka dowladda Mareykanka arrinkaas oo khilaafsan hadalladii uu horay ujeediyay Trump.
Wadanka Mareykanka Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa iclaamisay in mas'uuliyiinta ugu sarraysa melleteriga Mareykanka lageliyay xaalad Karaantiil ah kadib markii xubno sarsare laga helay Carona Virus.
War qoraal ah oo kasoo baxay Pentagon-ka ayaa lagu sheegay in lakaraantiilay Mark Esber oo ah wasiirka difaaca iyo kaalayaashiisa waxaana la xaqiijiyay in cudurka laga helay 37 kamid ah howlwadeennada wasaaradda Gaashaandhigga gaar ahaan shaqaalaha magaalada Washington ee caasimada ah.
Melleteriga Mareykanka ayaa sheegay in 18 kamid ah ciidamadiisa ay dhibanayaal uyihiin cudurka Carona Virus, 24-kii saac ee lasoo dhaafay ayaa 495 jeer mas'uuliyiinta Pentagon-ka laga baaray Carona Virus arrinkaas ayaana muujinaya cabsida iyo halista uu cudurkan ku hayo dowladda Mareykanka oo loollan dhaqaale iyo mid melleteri kula jirta shiinaha oo ah meesha uu kasoo bilaawday cudurkaan dilaaga ah.
Donald Trump ayaa magaalada Washington ka sheegay in sedax bilood gudahood lagusoo saari doono tallaal suurta gelinaya in cudurkan lagula tacaalo, Mareykanka ayaa kaalimaha dhexe kaga jira dalalka uu dadka ugu badan ku dilay Carona Virus.